किन राखियो गणेशको फोटो मुस्लिम देशको नोटमा ? – Palpapati
Home > रैनादेवी > किन राखियो गणेशको फोटो मुस्लिम देशको नोटमा ?
किन राखियो गणेशको फोटो मुस्लिम देशको नोटमा ?
April 17, 2018 April 17, 2018 Bishnu557
पाल्पा-प्राय हामी विश्वका अलग-अलग देशको रोचक तथ्य सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । तर केही कुरा यस्ता हुन्छन् जुन भावनासँग जोडिन्छन् । यस्तै एक देश हो इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियालाई विश्वकै सबैभन्दा धेरै मुस्लिम आबादी भएको देश भनेर चिनिन्छ ।
यहाँको मुद्रालाई नेपालसँग मिल्दोजुल्दो लाग्ने ‘रुपियाह’ भनिन्छ । त्यसबाहेक अझै रोचक कुरा त के छ भने मुस्लिम देश इन्डोनेसियाको मुद्रामा हिन्दू धर्म र नेपालमा पुजनीय गणेशको तस्वीर छापिएको छ । आखिर किन होला ? यसको कारण पनि रोचक छ ।इन्डोनेसियामा करिब ८७ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्याले इस्लाम धर्म मान्दछन् । हिन्दूहरु केबल ३ प्रतिशत छन् । रुपियाह भनिने इन्डोनेसियाको २० हजारको नोटमा भगवान गणेशको फोटो छ । त्यहाँका बासिन्दाले गणेशकै कारण देशको अर्थव्यवस्था मजबूत भएको विश्वास गर्ने भएकाले नोटमा गणेशको फोटो छापिएको बताइन्छ ।